C.raxmaan Xoosh Jibriil oo ka hadlay Walaalkii oo kamid ahaa Dhalinyaradii Kufsiga ka gaystay Galdogob +Video - Hablaha Media Network
C.raxmaan Xoosh Jibriil oo ka hadlay Walaalkii oo kamid ahaa Dhalinyaradii Kufsiga ka gaystay Galdogob +Video
HMN:- C.raxmaan Xoosh Jibriil oo hore u ahaa xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya ayaa war ka soo saaray kiis kufsi ah oo ka dhacay Gobolka Mudug, Wuxuuna sheegay in mid ka mida wiilasha falka geystay uu yahay walaalkiisa la dhashay, wuxuuna sheegay inuu ku baaqayo in sharciga la horkeeno intii falkaasi geysatay. Wuxuuna Qoraalkiisa ku Bilaabay Sidan.
Ujeedo: Kufsiga ka Dhacay Galdogob : Waxaan asxaabteyda u sheegayaa in dadka lagusoo eedeeyay Arrintaan foosha xun uu ku jiro wiil aan walaalo nahay oo 15 jir ah. Inta aan ka war qabo waa inta soo socta:
5. Waxeey wiilasha ii sheegeen in ey arrintu dhex taallo wadaadada magaalada Galdogob, laakin eey ka fiican tahay
in la marsiiyo dacwo madina ah lana kaashado, Duqa magaalada Mudane Ayaxle iyo dowlad goboleedka Puntland. Waan ku raacay arrintaas waxaana uga digay inaan arrintaan xaal Somali lagu dhameeynin iyo hoos-hoos.
6. Dhowr maalmood kadib waxaan la hadlay Guddoomiyaha degmada Mudane Ayaxle oo aan ku iri arrinta sharciga ha loo wareejiyo, lagana saaro xeer Somali. Mudane Ayaxle wuu igu raacay.
7. Waxaa dhacday in ciidan Police ah oo Puntland ah eey yimaadeen magaalada maalma kadib uuna dalbay Mudane Ayaxle, laakin buuq lagu furay askartii, buuqaas oo ka yimid wadaadada oo ku andacoonaya in shareeco la marsiiyo. Askartii saas beey ku noqdeed.
8. Dadkii falkaan xun lagu eedeynayay waa xiran yihiin, aniga iyo reerkeygana waxaan taageersannahay in sharciga la marsiiyo ciddii lagu helo fal dambiyeed.
9.Marna aniga iyo walaalaheey ( oo gabdho u badan) ma difaaceeyno falalka noocaan oo kale in uu waddankeenna iyo meel kaleba ka dhaco.
10.Laakin waxaan rabnaa in dhowr natiijo kaso baxdo arintaan:
(a) In dambi baaris fiican la sameeyo si loo xaqiijiyo siday wax u dhaceen.
HALKAN KA DAAWO SIDA AY GABADHA WAX UG UDHACEEN